Xisbi uu hogaamiyo Muungaab oo la guddoonsiiyey shahaadada diiwaangelinta xisbiyada… – Hagaag.com
Xisbi uu hogaamiyo Muungaab oo la guddoonsiiyey shahaadada diiwaangelinta xisbiyada…
Munaasabad kooban oo maanta ka dhacday xarunta Guddiga Doorashooynka Qaran ayaa waxaa lagu guddoonsiiyay Xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka shahaadada KMG ah ee diiwaangalinta Xisbiyada siyaasadda dalka.
Xasan Maxamed Xuseeen (Muungaab) oo dowladihii KMG iyo Dowladdii u dambeysay ka soo qabtay xilal kala duwan sida Guddoomiyaha Maxkmadda Ciidanka Qalabka Sida labadeeda darajo xilligii Madaxweyne Sheekh Shariif iyo Guddoomiyaha G/Banaadir ahaana Duqa Muqdisho iyo Wasiiru dowlaha Cadaaladda xilligii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligan noqonaya Hogaamiyaha Xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka ee maanta qaatay shahaadada diiwaangalinta axsaabta.
Munaasabadda guddoonsiinta shahaadaha ayaa waxaa ka soo muuqday Xildhibaano hore iyo aqoonyahanno ka mid ah xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka.
Xasan Muungaab ayaa lagu xasuustaa waxqabadkii dhanka cadaaladda markii uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda Ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliya oo la dhihi karo waxa uu ahaa aas-aase howlgeliyay Maxkamadda CQS wax badana ka qabtay Cadaaladda dhibbanayaal badan iyo anshaxa ciidanka Soomaaliya., halka lagu xasuusto Xilligii uu ahaa Guddoomiyaha G/Banaadir iyo Duqa Muqdisho Barnaamijkii Cadaaladeed ee Hanti isku celintii iyo Mashruucii Horumarineed ee Dalkaaga dhiso.
Aas-aasidda xisbigaan siyaasadeed ee uu hogaaminayo Xasan Muungaab ayaa u muuqata in uu u diyaargaroobayo doorashooyinka dalka ee 2021 taasoo ku salaysnaan doonto hanaanka Xisbiyada badan sida la qorsheeyay.